အရမ်းချမ်းသာပြီးမှ ဆင်းရဲသွားကြသော ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ တစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်များ - Shwe Khit Online TV
HomeEntertainmentအရမ်းချမ်းသာပြီးမှ ဆင်းရဲသွားကြသော ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ တစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်များ
June 29, 2021 Yan Entertainment 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အရမ်းချမ်းသာပြီးမှ ဆင်းရဲသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ တစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စည်းစိမ် ငွေ ဆိုတာ မတည်မြဲ ဘူးဆိုတဲ့ သဘောတရားက မှန်ပေမယ့်လည်း သုံးမကုန်လောက်အောင် ချမ်းသာပြီးမှ ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီတစ်ချို့ ဘာကြောင့် ဆင်းရဲသွားကြလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်
ဂီတလောက မှာ ပေါ့ပ် ဘုရင် ရယ်လို့ တင်စား ခံရသူကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အသည်းစွဲ အဆိုတော် မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်ရဲ့ နာမည်ကြီးလှသော ကကွက် တွေနဲ့ သီချင်းတွေဟာရင် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အကြီးအကျယ် ရရှိခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း သူ့ရဲ့ အကြွေးတင်တဲ့ ပြဿနာက အတော်လေးကြီးမားပြီး Nverland မှာ ရှိတဲ့ သူ့အကြိုက်ဆုံး အိမ်ကိုတောင် အပေါင်သိမ်းခံရတဲ့ အခြေအနေ ထိ နီးစပ်ခဲ့တာပါ ။ ဒါ့အပြင် အသုံးစရိတ် ကြီးမားလွန်းတဲ့ အတွက် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟာ ငွေ ချေးခဲ့ပြီး အကြွေးပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဂျက်ဆင်ရဲ့ ငွေကြေး ပြဿနာဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးမားလာပြီး တစ်ခါတုန်းကဆိုရင် အကြွေး ကိစ္စကြောင့် တရားတဘောင်မှာ တရားစွဲဆို ခံရတဲ့ အထိတောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းများအရ သူ သေဆုံးချိန်မှာ အကြွေးငွေ ပမာဏပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ( ၄၀၀ ) ကနေ သန်း ( ၅၀၀ ) ကြား အကြွေးတင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်ရဲ့ အိမ်အကျိုးတော်ဆောင်တွေက သူ့ရဲ့ ငွေကြေးပြဿနာတွေကို အခုအခါမှာတော့ ဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပြီး မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်ဟာလည်း ( ၂၀၁၂ ) ခုနှစ်ရဲ့ သေဆုံးပြီး အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး ရရှိသူ တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ ရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ နီကိုးလပ်စ် ကေ့ဂျ်
နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ နီကိုးလပ်စ်ကေ့ဂျ် ဟာဆိုရင်လည်း သူ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေ မှာ အတော်လေးကို အသုံး အဖြုန်းကြီးခဲ့ပြီး အိမ်တွေ ၊ ကားတွေ နဲ့ ရှားပါးတဲ့ အနုပညာလက်ရာ များစွာကို ဝယ်ယူခဲ့တာပါ ။ ( ၂၀၁၅ ) ခုနှစ်မှာတော့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ နီကိုးလပ်စ်ကေ့ဂျ်ဟာ ( ၁၉၉၆ ) ခုနှစ်ကနေ ( ၂၀၁၁ ) ခုနှစ် အတွင်း ဒေါ်လာ သန်း ( ၁၅၀ ) ကျော် အထိ သုံးဖြုန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အစိုးရ အေဂျင်စီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IRS ဟာ နီကိုးလပ်စ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတော်တော်များများကို အခွန်စည်းကြပ်ထားလိုက်တော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့အပြင် နီကိုးလပ်စ် ဟာ ( ၂၀၀၇ ) ခုနှစ် တုန်းက အခွန်ရှောင်တိမ်းခဲ့မှု ကြောင့် ဒေါ်လာ ( ၆ ) သန်း ဒဏ်ငွေ ဆောင်ခဲ့ ရပါသေးတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နီကိုးလပ်စ် ဟာ ငွေကြေး မပြေလည်တဲ့ ပြဿနာတွေ ကြောင့် Treasure Comic စာအုပ်အပါအဝင် တစ်ချို့ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချခဲ့ရပါတော့တယ် ။ ( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ် မေလ မှာတော့ ငွေကြေးစောင့်ကြည့်သော မီဒီယာတွေ ရဲ့ သတင်းအရ နီကိုးလပ်စ်ကေ့ဂျ် ရဲ့ ငွေကြေး ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဒေါ်လာ ( ၂၅ ) သန်း ပဲ ရှိတော့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ မိုက်တိုင်ဆန်
တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ဘောက်ဆင် လောက မှာ အကြမ်းဆုံး ဖိုက်တာ တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူကတော့ မိုက်တိုင်ဆန် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်တိုင်ဆန်ဟာ ငွေကြေး အသုံးဖြုန်း ကြီးမားမှုတွေ ကြောင့် ဒေဝါလီ ခံခဲ့ရတဲ့ အပြင် ထောင် ဒဏ်ချမှတ် ခံခဲ့ရတာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ( ၂၀၀၃ ) ခုနှစ်မှာတော့ မိုက်တိုင်ဆန် ဟာ IRS ၊ ဗြိတိန် အခွန်အာဏာပိုင် ၊ ရှေ့နေတွေ ၊ ကိုယ်ပိုင် Training ဆရာ ၊ ဘဏ်မန်နေဂျာ နဲ့ ဂီတ ထုတ်လုပ်သူတွေ ထံမှာ အကြွေးပေါင်း များစွာ တင်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့အပြင် တိုင်ဆန် ဟာ ဇနီး ဖြစ်သူကို ကွာရှင်းမှု အတွက် ဒေါ်လာ ( ၉ ) သန်း နစ်နာကြေး ပေးခဲ့ရပြီး ကလေး စရိတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးရ တာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အချိန်ကြာလာတဲ့ နောက်မှာတော့ မိုက်တိုင်ဆန် ဟာ သူ့ဘ၀ကို ပြန်လည် တည့်မတ်လာခဲ့ပြီး နောက်လူတွေကို သူ့လိုမျိုး မမှား ရအောင်လည်း အင်တာဗျူးတွေ ကနေ ဆင့် ဆုံးမ ခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ မိုက်တိုင်ဆန်ဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ The Ranch Companies အမည်ရှိ ဆေးခြောက် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တာတွေ အပြင် ဆိုရှယ် မီဒီယာ ချန်နယ် တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာတွေ ကြောင့် မိုက်တိုင်ဆန် ရဲ့ ဝင်ငွေဟာ အတော်လေး များပြားလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ 50 Cent
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမယ့် Celebruty တစ်ယောက်ကတော့ နာမည်ကျော် ရက်ပ် အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ 50 Cent အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ 50 Cent ဟာ ( ၉၀ ) ခုနှစ်တွေ တုန်းက ရက်ပ် အဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဝင်ငွေ အတော်များများကတော့ တစ်ခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကနေ ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ( ၂၀၁၅ ) ခုနှစ် မှာတော့ 50 Cent ဟာ ကြွေးမြှီးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရှိလာပြီး တရားစွဲဆို ခံရတာတွေ အပြင် ကလေး ထောက်ပံ့စရိတ်တွေ ကို မပေးတာကြောင့် ဒေါ်လာ ( ၃၂.၅ ) သန်းကျော် အကြွေးတင်ခဲ့ရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ 50 Cent ဟာ ဒေဝါလီ ခံမည် ဟု ကြေငြာခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ပရိသတ် အတော်များများ အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ( ၂၀၁၈ ) ခုနှစ် မှာတော့ 50 Cent ဟာ မီလျံနာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အကြောင်းကတော့ ( ၂၀၁၄ ) ခုနှစ် တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်က နေရရှိတဲ့ Bitcoin ငွေကြေး ( ၇၀၀ ) ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ 50 Cent ကတော့ သူဟာ ဒီ Bitcoin ငွေကြေးတွေကို တစ်ခါမှ မပိုင်ဆိုင်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေက မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း တရားရုံးတော်ကိုလည်း အထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေ နဲ့ တင်ပြခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ လယ်ရီ ကင်း
နာမည်ကြီး အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ လယ်ရီ ကင်း ဟာဆိုရင် ( ၁၉၄၀ ) ခုနှစ်ကနေ ( ၁၉၆၀ ) ခုနှစ် အထိ မိုင်ယာမီ နဲ့ ဖလော်ရီဒါတို့မှာ ရေဒီယို အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အဖြစ် စတင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ( ၁၉၇၁ ) ခုနှစ်မှာတော့ လယ်ရီ ကင်း ဟာ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆီကနေ ဒေါ်လာ ( ၅၀၀၀ ) လိမ်လည် မှု ဖြင့် တရား စွဲဆို ခံခဲ့ရပါတယ် ။ လယ်ရီ ကင်း တစ်ယောက်ကတော့ ထိုစွပ်စွဲချက်တွေကို တရား ရုံးမှာ ပြန်လည် ပယ်ဖျက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ ဒီကိစ္စကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကင်း ဟာ အကြွေးထူတဲ့ ငွေကြေးပြဿနာ များစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ( ၁၉၇၈) ခုနှစ် မှာတော့ ဒေဝါလီခံတယ်လို့ ကြေငြာ ခဲ့ရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းစွာနဲ့ လယ်ရီ ကင်း ဟာ ဒေဝါလီ ခံခဲ့ရတဲ့ နှစ် အတွင်းမှာပဲ ဝါရှင်တန် ဒီစီ မှာ ရှိတဲ့ National Radio Talk show တစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်း ခံခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လယ်ရီ ကင်း ဟာ CNN မှာ ပြသနေတဲ့ Larry King Live အစီအစဉ် နဲ့ ပြန်လည် နာမည် ရလာခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အရမ်းချမ်းသာပြီးမှ ဆင်းရဲသွားကြသော ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ တစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလို မျိုး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
မျက်နှာခွဲ စိတ်ပြုပြင်ပြီး မယုံနိုင်အောင် ပြောင်းလဲ သွားကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ က အမျိုးသမီး ( ၈ )ယောက်
သေသွားပြီလို့ ဆရာဝန်တွေ သတ်မှတ်ပြီးမှ ထူးဆန်းစွာ ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်များ